China Pharmaceutical Ro Mvura Kurapa system vagadziri uye vanotengesa | IVEN
Chemishonga Mvura Kurapa - PW / WFI / PSG
Reverse osmosis ndiwo makore makumi masere akasimudza membrane yekuparadzanisa tekinoroji, iyo inonyanya kushandisa iyo inogona kuumbika membrane kupenyerera musimboti, kuti iipe imwe nzira nekushandisa kumanikidza kune yakasikwa yekupinda kunongedzera kurwisa kwesimba remvura mune yakanyatsogadziriswa mhinduro sanganisa mhinduro kuti ipinde iyi nzira inonzi reverse osmosis. Nezvinhu zvemuchina iri reverse osmosis reverse osmosis unit.
Imwe, mbiri reverse osmosis + EDI kugadzirira (yakanatswa maitiro emvura maitiro)
1 Inokodzera mbishi yemvura yakasviba ichienzaniswa neUrefu hwematunhu;
2 chigadzirwa mvura yekuitisa iri nani;
3-imwe-nguva kudyara kushoma;
4 yakaderera mashandiro ekushandisa;
Kukohwa kwemvura (m³ / h)
Minimum mvura (m³ / h)
Desalinated mvura (%)
Kushanda tembiricha (℃)
Yakachena steam jenareta
1.Kugadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa neJB20031-2004 Yakachena Steam jenareta, yedu LCZ yakachena steam jenareta inoshandisa kupisa kwemhepo kuti ibudise yakachena-yakachena steam isina kupisa sosi. Iyo jenareta inoshanda kune sterilization uye inogona kunyatso kudzivirira kusvibiswa kwechipiri kunobva kune inorema simbi, sosi inopisa uye mimwe mirwi isina kuchena. Iyo michina inoratidzirwa neepamberi tekinoroji, yakasarudzika dhizaini, compact dhizaini, zvine musoro kumisikidza uye yakanaka kupisa kupisa kune iyo shell, iyo inounza yakaderera kupisa kupisa, yakanyanya kupisa kupisa, diki pasi nzvimbo kufukidza, nyore mashandiro uye kumisikidza uye kugadzikana kwakanaka. Jenereta yedu inoenderana nemitemo yeGMP yeHurumende uye yave ichishandiswa zvakanyanya kune sterilization muhutano, mishonga uye indasitiri yezvikafu.
2. Chikamu chechikamu: sosi yemvura uye chiyero chekuchenesa tangi remvura
Iyo tangi inopisa iyo deionized mvura ne steam kubva kune bhaira kuitira kuti ibudise yakachena-yakachena steam. Preheater uye evaporator yetangi inotora iyo yakasimba isina musono simbi simbi chubhu uye iine kupisa kwakanaka kuchinjisa. Iyo tangi inogona otomatiki kugadzirisa mvura inopinda zvinoenderana nehutsi tembiricha mune bhaira kuti iwedzere iyo yakachena steam kuburitsa. Uye zvakare, yakakwira-yakachena chiutsi ine akasiyana backpressure uye kuyerera mwero inogona kuwanikwa nekugadzirisa iyo yekubuda vharuvhu.
3. Iyi michina inowanikwa mumhando nhatu, kureva yakazara-otomatiki, semi-otomatiki uye mashandiro mashandiro kusangana nezvinodiwa zvevashandisi vakasiyana.
Main technical technical parameter
Kugadzirwa kwakachena kwemhepo（L / h）
Kuchenesa kupisa kwemhepo（makirogiramu / h）
Kunatswa kwemvura（makirogiramu / h）
Yedu LD yakawanda-inoshanda mvura distillator yakagadzirirwa uye kugadzirwa zvinoenderana nematanho eGG150-1998 Simbi Yekumanikidza Mudziyo uye JB20030-2004 Multi-athari Mvura Distillator. Zvese zvinhu uye zvikamu zvemidziyo zvinogadzirwa nesimbi isina 304 kana 316L. Mvura yakasvibiswa inogadzirwa kubva kumvura distillator ndeye yakachena uye isina kupisa sosi, inoenderana zvizere nehunhu hwese hwemvura yejekiseni yakataurwa muChinese Pharmacopoeia (2010 edition). Ichi chishandiso chinoratidza kuva sarudzo yakanaka kune vagadziri vemishonga yakadai sechigadzirwa chakasiyana cheropa, majekiseni, uye mhinduro yekumisira, zvipenyu antimicrobial agents pamwe nekunwa mvura yakadirwa mvura.
1. Iyi michina inowanikwa mumhando nhatu, kureva yakazara-otomatiki, semi-otomatiki uye mashandiro mashandiro kusangana nezvinodiwa zvevashandisi vakasiyana.
2. Water distillator ine inopfuura mitanhatu mhedzisiro haidi kuwedzera mvura inotonhorera.
Kukohwa kwemvura (L / h)
hwemvura kunwa (makirogiramu / h)
kunwa mvura mbishi (kg / h)
Zviuru mazana masere
Yakanatswa Mvura EDI Kurapa Sisitimu
1.Reverse osmosis rudzi rwembudzi yekuparadzanisa tekinoroji yakagadzirwa kubva kuma1980.
Inonyanya kushandisa iyo osmosis musimboti kana semi-yakajeka membrane. Dzvinyiriro inonzi reverse osmosis.
3.Chigadzirwa icho chinoumbwa ne reverse osmosis zvinonzi inonzi reverse osmosis mudziyo.
Yepakutanga uye yechipiri reverse osmosis + EDI
1.Applied munzvimbo dzine munyu wemvura mbishi yakakwira;
2.Good yemagetsi conductivity yemvura inogadzirwa;
4.Low inoshanda cose;
1. Modularity dhizaini, compact dhizaini.
2. Sisitimu inogona kusarudza yekupisa disinfection Ro membrane uye thermal disinfection EDI; iyo sisitimu yese inogona kuona pa-line inopisa mvura disinfection.
3.Kunyorovesa kaviri kunogona kuwana zvakateedzana kubatana nekushandisa iyo vharuvhu boka uye chizvarwa neimwe nzira.
4.Fudza pombi yemvura.1st nhanho yakakwira yekumanikidza pombi uye yechipiri nhanho yakakwira yekumanikidza pombi zvese zvinodzorwa ne frequency.
5. Sisitimu yekugadzira mvura yekugadzira inoshandisa nzira mbiri yekupa
6. Uchishandisa yepakati mvura yekuchengetera tangi seye buffer tank kuona kuchenesa pa-line, uchigovera neakasiyana yekuchenesa system.
7. Kugadzira isina simbi chubhu yakananga tensile kukotama mupombi sezvinobvira, dzivisa kutenderera.
8. Nekubatana kwepayipi uye zvikamu zvakasara, inotora arc yekudzivirira otomatiki yekutenderera track, uye kuona mhando yekutengesa
9. Kudzora system: PLC otomatiki ekudzora tekinoroji
10.Kurekodha modhi: Unogona kusarudza isina mapepa rekodhi yezvinyorwa zvisina mapepa uye zvakare pepa rekodhi maparamende akakosha munguva chaiyo.
Kubereka Kwemvura (m3 / h)
Minimum Water Kuyerera (m3 / h)
Desalted Mvura (%)
Kushanda Mvura Tempterature (° C)
Pashure: Kamuri Yakachena
Zvadaro: Kuchengeta tangi
Pre Yakazadza Syringe Kuzadza Machine, Yakagadzirirwa-Syringe Machine, Disposable Syringe & Tsono Production Line, Ampoule Muchina À Coudre Led, Ampoule Machine À Coudre Bernina, Ampoule Machine À Coudre Singer,